२६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनको समापन (घोषणापत्र सहित) « LiveMandu
२६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनको समापन (घोषणापत्र सहित)
५ आश्विन २०७७, सोमबार ००:११
३ दिनसम्म चलेको सम्मेलनले घोषणापत्र माथि व्यापक छलफल गरेको थियो । त्यसमा विज्ञ तथा सरोकारवाल व्यक्तिहरुले सुझाव दिनुभएको थियो ।
विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको सुझावअनुसार घोषणा पत्रमा आबश्यक कुराहरु थप गर्दै लैजाने समितिका अध्यक्ष डा. संजिव सापकोटाले बताउनु भयो ।
‘धेरै विज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवालाहरुले आफ्नोे अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । सो टिप्पणीअनुसार बाँकी कुराहरुलाई हामी समावेश गर्दै लैजान्छौँ’ डा. सापकोटाले भन्नुभयो ।
घोषणा पत्रले विश्वभरी छरिएर रहनु भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एकै ठाउँमा समेट्ने प्रयास गरेको डा. सापकोटाले उल्लेख गर्नुभयो ।